Taịl nile & na ifo bụ ihe RPG njem mgbaghoju anya na uzo dabeere ọgụ nke ọma mere | Gam akporosis
Njem ihe mgbagwoju anya taịl nile & Taịl bụ RPG enyere ụfọdụ ezigbo omume
Ngwakọta nke ihe dị iche iche na-enye karịa nsonaazụ na-agba ume ịchọta ụdị egwuregwu vidiyo ndị ọzọ na Storelọ Ahịa Play. Ọ dị ka ndị mmepe anaghịzi achọ igosi anyị otu igwe egwuregwu nke anyị ga-etipịa egwuregwu mgbe egwuregwu gasịrị, mana dị ka njikwa ndị ọzọ ma ọ bụ egwuregwu PC, ha na-ewetara anyị igwe dị iche iche ka anyị wee tinye aka na omume dịgasị iche nyekwuo ụdị na ọdịnaya nke iji mee ka ndụ nke egwuregwu vidiyo ahụ pụrụ iche. Nwere ike ịkpọ ole na ole na-apụta ìhè banyere ndị ọzọ, ma anyị ga-ahapụ ihe omimi nke anyị nwere taa n'aka anyị na nke ahụ bụ n'ezie otu n'ime egwuregwu kachasị mma nke anyị hụrụ gafere n'akụkụ ndị a.
Ma ọ bụ na Tiles & Tales bụ ikuku ọhụrụ na-esi na windo ahụ abịa ntụrụndụ na gam akporo iji tinye aka na egwuregwu egwuregwu nke na-etinye aka na njem nke na-egosi ekele maka Lilly, onye enyi na enyi mara mma nke anyị ga-enyere aka iche ihe ize ndụ ndị ahụ niile ọ ga-ahụ na mbọ ya iji weghachite anwansi ụwa nke Zanira . Ebumnuche nke egwuregwu ahụ dị mfe, Zanira bụ alaeze ochie nke jupụtara na nnukwu anụ ndị a na-aghaghị ịlanarị na nke ndị dike ole na ole ga-eche ha ihu iji gbalịa nwetaghachi udo na ya.
1 Ihe mgbagwoju anya na RPG
2 Nnukwu ọkwa dị iche iche na-echere gị
Ihe mgbagwoju anya na RPG
Can nwere ike na o siri ike na-arịọ maka ihe ọ bụla site taịl & Akụkọ, dị ka na-eweta ọnụ na obi ya oke usoro nke omume ọma iji nye anyị ụzọ ọzọ iji mee onwe anyị obi ụtọ site na ịgwakọta ihe bụ mgbaghoju anya, njem na mmetụ RPG nke na-enye anyị ohere iche ndị iro ihu na ntụgharị. Dika o nwere ihe nile ka anyi nwee obi uto tupu egwuregwu vidio siri ike nke aghaghi iburu n'uche site na taa.
The taịl nile & Akụkọ ifo gameplay ga-ewe gị n'ihu arụzi nke akpali usoro taịl nile achọtara na bọọdụ 5 x 4. N'ime ya ị nwere ụdị anọ, otu bụ ọgụ ọgụ ọbara ọbara, ọzọ bụ obi obi, ndị na-agwọ ọrịa na-acha akwụkwọ ndụ, ọla edo edo na ndị na-acha anụnụ anụnụ kristal. Ijikọta taịl ndị a ga - eme ka otu ike dị ukwuu nke a ga - eji rụọ ọrụ na njedebe nke ntụgharị megide onye iro Lily enyi anyị nwere.
Onye iro a nwere ike ịkọ ọgwụ ma lụso ọgụ ma ọ bụrụ na anyị emerie ya na mbido mbụ, yabụ Lily nwere ike ịchọta onwe ya n'okporo ụzọ ga-emerịrị ya. Ya mere, anyị nwere ike gwọ ya akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ mee ka ọ mepee igbe pụrụ iche ma ọ bụrụ na iji tokens anyị tinyekwuo isi karịa mkpọchi n'onwe ya. N'ịghọta usoro ndị a, anyị ga-achọpụta oke omimi nke egwuregwu vidio a nwere yana ọ na-ezo karịa ka ọ na-egosi na usoro mbụ.
Nnukwu ọkwa dị iche iche na-echere gị
Ọzọ nke kasị ukwuu àgwà nke a video egwuregwu bụ na e nwere a ọtụtụ ọkwa, ya mere a na-agbatị ndụ otu ihe nke ukwu.
N'elu ị ga-ahụ Lilly ma ọ bụ Gareth, onye isi nke na-eso ya na-agagharị, na-agbanye n'ọkwa ndị ahụ niile ma na-ezute ọtụtụ ndị iro. Ga-ahụ ihe pụrụ iche na igbe na imeghe, dịka mma agha, ọta, ike abụọ ma ọ bụ ọtụtụ ndị ọzọ ga-eme ka ihe dị mfe mgbe ị na-aga n'ihu na map map ahụ.
Taịlị na Taịlị bụ a Egwuregwu vidiyo na-enye ume ọhụrụ ma na-atọ ụtọ na ọ na-ahapụ onwe ya igwu egwu nke ọma na na site na oge mbụ na-ejikọ anyị ka anyị kpọọ ogologo oge. Have nwere ya n'efu na Playlọ Ahịa Google, ọ bụ ezie na n'oge a na-etinye ya na mpaghara, yabụ enwere ike ịnweghị ya na obodo gị.
Taịlị na Taịl nile bụ egwuregwu hoo haa nke ọma site na teknuzu. Nnukwu atụmatụ nke ndị odide, nke ndị iro, ụfọdụ mmetụta a rụzuru nke ọma na mbadamba na ụda ụda na nsonaazụ ụda nke na-aga n'aka. Ọ bụ egwuregwu nwere ọtụtụ nguzozi n'echiche ya niile. A iri maka mmepe.
Taịl na Taịl
Great oru mma
Ndị na-arụ ọrụ egwuregwu ya
Ya njikọ nke mgbaghoju anya na njem
O siri ike ịchọta mmejọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Njem ihe mgbagwoju anya taịl nile & Taịl bụ RPG enyere ụfọdụ ezigbo omume
Jiri ndi mmadu achoro ka ha buru ihe ndi kacha mma n'ime Gunman Taco Truck
Ogbugbu mmadu nke zombies na Zombie Age 3